आगामी हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, कस्को कोटाबाट को-को मन्त्री बन्ने ? – Smartkarnalinews
आगामी हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, कस्को कोटाबाट को-को मन्त्री बन्ने ?
बिहिबार, भदौ ११, २०७७ 2:01:28 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, ११ भाद्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले धेरै विषयको टुंगो लगाउने भएको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निर्णय प्रक्रियामा लगिने भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा रहेको सुझावलाई अन्तिम रुप दिई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ ११, २०७७ 2:01:28 PM